News 18 Nepal || कोरोना भ्याक्सिन सफल भएको घोषणासँगै हुनेछ यस्तो खतरा
कोरोना भ्याक्सिन सफल भएको घोषणासँगै हुनेछ यस्तो खतरा
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन सफल भएको घोषणा भएलगत्तै बजारमा नक्कली भ्याक्सिन बेचिन सक्नेछ । जब कुनै पनि कोरोना भाइरस सफल भएको घोषणासहित त्यो भ्याक्सिन बजारमा बेचिने घोषणा गरिनेछ त्यस लगत्तै अपराधीहरुले बजारमा नक्कली भ्याक्सिन उतार्न सक्नेछन् ।
बेलायतको नेशनल क्राइम एजेन्सीका अधिकारीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । बेलायती अखबार इण्डिपेन्डेन्टको रिपोर्ट अनुसार बेलायतका अधिकारीहरुले नक्कली कोरोना भ्याक्सिनको बिक्री रोक्नको लागि कारवाही सुरु गरिसकेका छन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार महामारीको सुरुवाती समयमा अपराधीहरुले नक्कली पीपीइ किट समेत बेच्ने कोसिस गरेका थिए । बेलायतको नेशनल क्राइम एजेन्सीको इकोनोमिक क्राइम सेन्टरका महानिर्देशक ग्रेएम बिगरले भ्याक्सिनको विषयमा ठूलो आर्थिक घोटाला हुन सक्ने ठूलो खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
भ्याक्सिन तयार भएसँगै नक्कली भ्याक्सिन बजारमा बेच्ने ग्याङ सक्रिय हुने उनले बताए । यसलाई रोक्नको लागि एजेन्सीले पहिले नै तयारी गरिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार आपराधिक समूहले यसअघि पनि कोरोना भाइरसका विषयमा विभिन्न आपराधिक कामहरु गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले यसअघि नक्कली कोरोना टेस्ट किट पनि बेच्ने कोसिस गरेका थिए । अमेरिकन र बेलायतका अधिकारीहरुले भ्याक्स्नि निर्माण गरिरहेका संस्थानहरुमा पनि श्याकरले आक्रमण गरेको बताएका थिए ।
नागरिक एप औपचारिक रुपमै सार्वजनिक, के-के छन् सुविधा ?
नेपालमा टिकटकको ठाउँ लिदै ‘थोप्ला’
५०० वर्षपछि पृथ्वीमा सौर्य तुफानको डर, वैज्ञानिकहरूको चेतावनी !
भारतद्वारा कोभिशील्ड निकासीमा रोक, अरू विकल्प नेपाललाई किन असहज ?
बिल गेट्सले किन चलाउँदैनन् आइफोन ?
चैत ८ गते पृथ्वीको नजिक आउँदै एउटा सम्भावित खतरा
मंगल ग्रहमा यसरी भएको थियो अन्तरिक्ष यान ल्याण्डिङ (भिडियोसहित)